ukhethe njani ukuba loluphi uvavanyo oluzenzekelayo?
Eyona Oomatshini Abazihambelayo Ukhetha njani ukuba loluphi uVavanyo oluzenzekelayo?
Ukhetha njani ukuba loluphi uVavanyo oluzenzekelayo?
Ngaba ukhetha njani ukuba zeziphi iimvavanyo oza kuzenzekelayo kwaye zeziphi iimvavanyo oza kuzishiya ukuze uzivavanye ngesandla?
Phambi kokuba uqale uvavanyo oluzenzekelayo, kufuneka ubone ukuba zeziphi izibonelelo ozifumanayo ngokwenza uvavanyo ngokuzenzekelayo emva kokuba uthathe ixesha, umzamo kunye nezixhobo ezityaliwe kutyalo-mali.
Apha ngezantsi kukho izinto ezithile ekufuneka ziqwalaselwe ukunceda ekuchongeni ukuba zeziphi iimvavanyo zesikhokelo ekufuneka zenziwe okanye ezingafanelekanga ukuba zenziwe ngokuzenzekelayo. Njengoko intetho endala ihamba, ngenxa yokuba ungayenza into ethile ayithethi ukuba kufanelekile.
Nazi izikhokelo zokunceda ukufumanisa abagqatswa abalungileyo bovavanyo oluzenzekelayo:
Uvavanyo ekufuneka luzenzekelayo:
Iindlela ezibalulekileyo zeshishini-iimpawu okanye ukuhamba komsebenzisi ukuba ukuba ziyasilela, zibangela umonakalo omkhulu kwishishini.
Uvavanyo olufuna ukuqhutywa ngokuchasene nalo lonke ulwakhiwo / ukukhutshwa kwesicelo, njengokuvavanywa komsi, uvavanyo lwengqondo kunye novavanyo lokubuyela umva.
Uvavanyo olufuna ukusebenza ngokuchaseneyo nokuqwalaselwa okuninzi- indibaniselwano ye-OS kunye nesikhangeli.
Iimvavanyo ezenza ukuhamba komsebenzi okufanayo kodwa zisebenzise idatha eyahlukileyo kwiziphumo zayo kuvavanyo ngalunye. eqhutywa yidatha.
Uvavanyo olubandakanya ukufaka umthamo omkhulu wedatha, njengokugcwalisa iifom ezinde kakhulu.
Uvavanyo olunokusetyenziselwa ukuvavanywa kokusebenza, njengoxinzelelo kunye novavanyo lomthwalo.
Uvavanyo oluthatha ixesha elide ukwenza kwaye lunokufuna ukuqhutywa ngexesha lekhefu okanye ubusuku bonke.
Uvavanyo lwexesha apho imifanekiso kufuneka ifakwe kwikhompyutha ukungqina ukuba isicelo siziphathe ngendlela elindelweyo, okanye ujonge ukuba uninzi lwamaphepha ewebhu ajongeka ngokufanayo kwizikhangeli ezininzi.
Ngokubanzi, ukuphindaphinda kokuvavanywa kokuqhuba, kokulunge ngakumbi kokuzenzekelayo.
Khumbula ukuba iimvavanyo ayisiyiyo kuphela abaviwa abazenzekelayo. Imisebenzi ezinje ngokuseta okanye ukwenza idatha yovavanyo yovavanyo lokuhlola olusebenzayo nazo zikwimigangatho emikhulu yokuzenzekelayo.
Uvavanyo olungafanelekanga ukuba luzenzekelayo:
Uvavanyo oluya kusebenza kube kanye kuphela. Ukuphela kwento eyahlukileyo kulo mgaqo kukuba ukuba ufuna ukwenza uvavanyo ngeseti enkulu kakhulu yedatha, nokuba ikanye kuphela, kuyavakala ukuyisebenzisa.
Uvavanyo lwamava omsebenzisi wokusebenziseka (iimvavanyo ezifuna ukuba umsebenzisi aphendule malunga nendlela elula ngayo usetyenziso).
Uvavanyo olufuna ukuqhutywa nge-ASAP. Ngokwesiqhelo, inqaku elitsha eliphuhlisiweyo lifuna ingxelo ekhawulezileyo ke ukuzivavanya ngesandla kuqala
Uvavanyo olufuna i-ad hoc / uvavanyo olungahleliwe ngokusekwe kulwazi / ubuchwephesha bovavanyo -Uvavanyo lokuHlola.
Uvavanyo lwangaphakathi. Uvavanyo ngaphandle kweziphumo eziqikelelweyo zibangela ingxolo eninzi eli xabiso. Ukufumana elona xabiso liphezulu ngaphandle kokuzenzekelayo iimvavanyo kufuneka zivelise iziphumo ezinokuqikelelwa nezithembakeleyo ukuze kuveliswe iimeko zokupasa kunye nokusilela.
Uvavanyo olufuna ukuqinisekiswa okubonakalayo, nangona kunjalo, sinokubamba imifanekiso yephepha ngexesha lovavanyo oluzenzekelayo emva koko sibe nokujonga ngesandla imifanekiso.
Uvavanyo olungenakuba yi-100% luzenzekelayo akufuneki luzenzekelayo, ngaphandle kokuba ukwenza njalo kuya konga ixesha elininzi.
vula iphone 6 ivenkile yeapile
elona cala lililo lokhuselo kumnyele we-s5
Ukuhlaziywa kweRowkin Bit Charge Stereo
Eyona fowuni ibhajethi ye-5G ngo-2021
U-Apple ulumkisa abathengi ukuba bangaweli kumkhonyovu wekhadi lesipho esithandwayo se-iTunes
Ividiyo icacisa ukuba ungayisebenzisa njani ifowuni ye-4G okanye ye-5G kwiVerizon ngaphandle kokushiya indlu yakho
Uyigcina njani ibhetri kwi-iPhone SE (2020), nayiphi na i-iPhone
Ezona ndlela zibiza kakhulu zePensile yeApple: Istayile se-iPad kuhlahlo-lwabiwo mali
Uphengululo lwamavili avuyayo: i-ragdoll physics yobugcisa egxile kwigazi nakwingcongolo
I-Apple ibhengeza ukudityaniswa kwelizwi kwePandora kwi-HomePod mini encinci, nantsi indlela esebenza ngayo
Indlela yokongeza kunye nokususa izikrini zasekhaya kwi-Android (usebenzisa iGoogle Launcher)
Isichazi magama sePython